Isamente Uthuli Collector, Bag House lokucoca ulwelo, Solenoid Pulse Valve - Xintian
IZIXHOBO ZOKHUSELEKO LOKUSINGQONGILEYO
Ngaphantsi kweemeko zokusebenza eziqhelekileyo, amandla e-centrifugal asebenza kumasuntswana angama-5 ~ 2500 amaxesha omxhuzulane, ke ngokusebenza komqokeleli wothuli kuphezulu kakhulu kunendawo yokulungisa amandla omxhuzulane. Ngokusekwe kulo mthetho-siseko, isixhobo sokususa uthuli senkanyamba kunye nokususa uthuli ngaphezulu kwe-90 yepesenti sifundwe ngempumelelo. Phakathi kwezinto ezisusa uthuli ngomatshini, isusa uthuli lwenkanyamba lolona lusebenzayo. Kukulungele ukususwa kwe-non-visc ...
YJD-A / B series ukothula isixhobo, okwabizwa ngokuba uthuthu ukothula ivelufa kunye yombane yokutshixa vana, ibandakanya iindawo ezintathu: motor, izinyo umahluko reducer langa (X) okanye pinwheel cycloid reducer (Z) kunye ukothula rotary. Zimbini izinto ezicacisiweyo kunye nama-60. Kuyinto ...
SJ kabini-axis uthuli humidifier Xa usebenza, uthuthu kunye zeesilika kwisiseleni ziya kuthunyelwa ngokufanayo kwisilinda yi-impeller feeder, i-blade iya kutyhala uthuthu kunye ne-slag phambili, kwaye umbhobho wamanzi uya kongeza isixa esifanelekileyo samanzi ukuvusa nokunyanzela ukuxubana. Kwinkqubo yokuxuba, umsantsa othile phakathi kodonga lwesilinda kunye ne-shaft evuselelayo igcinwa ukutyhala izinto ezikhutshiweyo, ezineempawu zesakhiwo se-compact, itekhnoloji ephezulu, i-stabl ...
Ukusetyenziswa kwayo okuphambili kwifayibha yokwenziwa, ukusuka kwinqwelomoya, kusenzelwa indibaniselwano enye engaqhelekanga yokuma okumileyo; Ukujongwa kwicala lecandelo, inaliti ehamba kwiAngle ethile kwindiza ejongene nayo yenza ukuba ifayibha enye ibonise imeko entsonkothileyo. 1, Ukungena komoya okuhle: xa kuthelekiswa nezinye izinto zokucoca ulwelo, umahluko omkhulu kukuma kwepore kwizinto zokucoca ulwelo. 2, Ukusebenza ngokuqokelelwa kothuli oluphezulu: ukuziva okufunwayo (ibhegi yothuli) intsimbi enye, ukuze kuyilwe ...
Ubuhle, ingxowa yothuli enokumelana nobushushu obuphezulu (204 ~ 240 ℃), i-asidi eyomeleleyo, ialkali, isantya sokucoca okuphezulu, ilahleko ephantsi yoxinzelelo, kunye neempawu zokusonga, ukumelana okuhle nokunxiba, kodwa akukho kuxinzelelo lobushushu kwihydrolysis , isetyenziswe ikakhulu kwisikhululo sokuxuba i-asphalt, igesi yentsimbi, i-flue gas, i-carbon emnyama (i-carbon emhlophe emnyama), ukukhupha, i-fire fire fire fire fire, i-firebrick yomsi kunye nomsi wokutshiza kunye nezinye izinto zokusebenza ...
I-Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd inesikhundla esiphezulu, i-West 106 National Highway, North Shihuang Expressway, East 104 National Highway, Jingfu Expressway, BeijingShanghai Railway, Highway kunye ne-Railway crisscross, kwaye ukugcwala kwabantu kulula kakhulu. Ukusekwa kothungelwano lwezithuthi kubonelela ngesiqinisekiso sexesha lothutho nasemva kokuthengisa iinkonzo.
IZIGANEKO NEMIBONISO YORHWEBO
I-ceramic multi-tube umqokeleli othuli sisixhobo sokususa uthuli esiqulathe iiyunithi zokuqokelela uthuli lwecyclone ezininzi (ezikwabizwa ngokuba yinkanyamba yodongwe). Ingabunjwa yiyunithi yokuqokelela uthuli lwe-ceramic okanye i-DC yenkampani yokuqokelela uthuli;
Izixhobo zazisa HMC series ukubetha ilaphu ingxowa umqokeleli uthuli umqokeleli uhlobo ibhegi uthuli umqokeleli. Yamkela isikhwama sokucoca setyhula, inkqubo yokungenisa umoya ene-self-equkethe imo yokucoca i-ash ash mode, enezinzuzo zokususa uthuli oluphezulu, uthuthu olulungileyo ...
I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Ingqokelela yothuli, Isihluzi seFelt Bag, Isamente Uqokeleli Uthuli, Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli, Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo,